Bakhathazekile ngokungathuthwa kwemfucuza eMbali | Eyethu News
Bakhathazekile ngokungathuthwa kwemfucuza eMbali
“Ukuhlanzwa kwalendawo kugcine ngo-Okthoba wonyaka odlule.”
enye yezindawo ezinodoti ongalandwa eMgungundlovu . Isithombe : sigciniwe
ASEZWAKALISE okukhulu ukukhathazeka amalunga omphakathi aseMbali Unit BB kanye ne- 13 njengoba ekhala ngokuthi indawo abahlala kuyo iyaxathuka. Lomphakathi uthe ususabela ukuphepha kwezingane zawo kulezindawo ezidlala kuzo njengoba kunezimvula kulezinsuku zigcwala amanzi lokho okuzoholela ekugwulizeni kanye nasekulahlekeni kwemiphefumulo.
Ngokuthola kwaleliphephandaba alukho uhlobo lukadoti olungatholakali kulezindawo zokulahla, kusukela emaphepheni, plastic, amajazi omkhwenyana asebenzile, amaqakelo (pads), amaphilisi anhlobonhlobo, imijovo esebenzile nesavaliwe kanye nokudla osekubolile.
Ngokusho kwamalunga omphakathi wakulendawo athe bekunenkampani ebithole inkontileka yokuhlanza, abenza umsebenzi oncomekayo kwavele kwashintsha izinto esithubeni ngenyanga ka- Okthoba wonyaka ofile kwama nse ukusebenza kohlelo kwaqala phansi ukungcola.
Omunye obesebenzela lenkampani i Zenzwezinhle Multipurpose Primary Corporative ongathandanga ukuba igama lakhe lidalulwe uthe eminyakeni emibili edlule uMasipala waseMgungundlovu wabanikezela ngohlelo obeluthi- One ward one co-op.
“Inkampani ebesiyisebenzela isimisile yathi izobathinta masekulunge indaba yesitifiketi esigunyaza ukuthi sisebenze. Lokhu kwasixaka kakhulu asazi noma ukushintshwa kwekhansela okwaba yimbangela yokushenxa noma ukushenxiswa kwenkampani”, kuchaza lona.
Ikhansela laku-ward 17 u Thamsanqa Wonderboy Sithole uthe uhlelo lokusebenza kwamaco-op lwaphelelwa inkontileka ngo- Okthoba ibingakavuselelwa basafake isicelo sokuthi bathole ukulekelelwa. “Ngokubuka ukuthi isimo asikho sihle sicele amavolontiya enhlangano ebusayo i-African National Congress ukuba asilekelele.
Siyabanxusa abantu ukuthi bawushise udoti uma bezolahla kulezindawo okulahlwa kuzona ngokungemthetho. Loluhlelo lwama co-op belungayi ezindlini beluthathaudoti kulezindawo okulahlwa kuzo ngokungemthetho, lona lwaqala kahle kunabantu abangu-40 yonke into yayishesha kwagcina sekunabantu abangu- 10 okwaba yinto eyayisikhalisa abantu ngoba kwase kuhamba kancane,” kubeka ukhansela Sithole.
Uqhube wathi bayalulungisa loludaba lokuthi kuqoqeke udoti nomkhandlu ngoba ngeke bakwazi ukuhlala ukuhlala endaweni engahlanzekile. Uphethe ngokuthi acele umasipala ukuba abenzele izindawo zokulahla udoti ezikemthethweni.
UKaunda wamukele isigwebo sababulali bosomatekisi